७ वटा कम्पनीको १ अर्ब ६५ करोड हकप्रद शेयर पाइपलाइनमा,कुनको कति ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
मंसिर १७, २०७८ | आजको अर्थ
काठमाडौं, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा ७ वटा कम्पनीको हकप्रद शेयर पाइपलाइनमा रहेको छ ।
सेबोनको पाइपलाइनमा २ वटा बीमा, २ वटा हाइड्रोपावर, २ वटा फाइनान्स र एउटा विकास बैंकको हकप्रद रहेका छ। यी कम्पनीले कुल १ अर्ब ६५ करोड २८ लाख ६४ हजार ६०० रुपैयाँबराबरको हकप्रद निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्।
शिखर इन्स्योरेन्स १०ः३ अनुपातमा कुल ५२ लाख ७५ हजार ५७२ कित्ता हकप्रद निष्कासनको पर्खाइमा छ। हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ।
यसैगरी आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले १०ः४ अनुपातमा हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको छ। अनुमति पाएमा यो कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल ४६ लाख ३० हजार ३४४ कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्नेछ। हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले पनि १ः१.५ प्रतिशतमा कुल ३० लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। सिभिल क्यापिटल हकप्रद बिक्री प्रबन्धकका रुपमा रहेको छ।
यस्तै, समृद्धि फाइनान्सले २ः१ अनुपातमा २७ लाख २९ हजार ७०५ कित्ता हकप्रद निष्कासनका लागि सेबोनसँग अनुमति मागेको छ। समृद्धिको हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा बीओके क्यापिटल मार्केट रहेको छ।
नेपाल फाइनान्सले पनि १ः०.७ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३४ लाख ५४ हजार ४७४ कित्ता हकप्रद निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन पेस गरेको छ। हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
अपी पावर र छ्याङ हाइड्रोपावरले पनि क्रमशः १ः०.३९ र १०ः३ अनुपातमा हकप्रद निष्कासनको तयारीमा छन्। यी दुवैले १०० अंकित दरका कुल १ करोड ८ लाख ६० हजार कित्ता र ८ लाख ९३ हजार २५ कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन्।
हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा अपी पावरको मुक्तिनाथ क्यापिटल र छ्याङ्दीको ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेका छन्।